Sida loo hubiyo xaalada batterigaaga talaabooyinkan fudud | Wararka IPhone
Waqtigu markuu dhaafo, waa iska caadi inaad ogaato in baytariga aaladda Apple ugu dambeeya oo sii yaraada. Guud ahaan, tani waa wax caadi ah waana inaanan ka walwalin ama ka baqin tan iyo markii la isticmaalayo, baytarigu wuu gabowmayaa.
Haddii aan ogaanno in muddada ah baytarigu aad ayuu u gaaban yahay oo waxaan la joognay iphone-ka ama ipad-gaaga mudo gaaban way fiicnaan laheyd la xiriir adeeg farsamo oo rasmi ah si loo hubiyo xaaladdeeda, maadaama ay cillad ku tahay warshadda oo ay u baahan tahay in la beddelo. Hadday dammaanad ku jirto, booqashadu waa mid loo baahan yahay mar haddii aysan waxba innagaga kacayn oo mustaqbalka fog ay na anfaci doonaan. Haddii tani ay tahay kiiskaaga, waxaan kugula talineynaa inaad horey u aqriso maqaalka lagu daabacay halka aan ka hadalno dammaanad qaad baytariyada.
Boostada aan soo sheegnay, waxaan uga hadalnay bedelka batteriga inkasta oo uu ku jiro damaanad, waxaa macquul ah in loo diidi doono haddii uusan buuxin shuruudaha Apple, taasi waa ku wareeji wareegga waa inay ahaadaan inta udhaxeysa 80% iyo 100% oo dabcan horay uma booqan adeeg kasta oo farsamo oo aan la oggolaan.
1 Waa maxay wareegga kharashka?
2 Immisa wareeg oo lacag ah ayaa sameeya iPhone-kayga iyo iPad-kayga?
3 Sideen ku hubiyaa xaalada baterigayga?
3.1 Ku rakibidda App
3.2 Ku rakibidda iBackupbot on our Mac
3.3 Macluumaad kasta oo macnaheedu muxuu yahay?
Waa maxay wareegga kharashka?
Un wareega wareejinta Waa marka aan dhammeyno 100% ee batteriga, ama hal kuleyl ama dhowr, taas oo ah, waxaan kubilaabnaa subaxa hore iphoneka 100% baytariga galabtana markay gaarto 50% ayaa naga hartay oo aan u dhigno inaan soo dalacno gebi ahaanba. Waxaan sameynay nus wareeg lacag ah. Haddii habeenkii aan dib ugu celinno lacag markii ay ka hartay 50% oo aan ka saarno markii ay si buuxda u buuxiso, waxaan sameyn doonnaa wareeg lacag-bixin buuxda ah. 50% galabtii oo lagu daro 50% habeenkii waxay ka dhigeysaa wadarta 100%.
Immisa wareeg oo lacag ah ayaa sameeya iPhone-kayga iyo iPad-kayga?
Rasmi ahaan ma jiro tiro sax ah oo inoo sheegaysa inta jeer ee wareegyada qalabkeennu yeelan doonaan, laakiin waxaa jira tirooyin cilmiyaysan oo qiyaasa ilaa 500 wareeg wareeg oo loogu talagalay iPhone-ka iyo ilaa 1000 wareeg oo lacag-bixin buuxa ah oo ah cimriga iPad-kayga. Sida aan dhahno, ma ahan xog rasmi ah oo ay soo saartay Apple, kaliya waa qiyaaso la sameeyay ka dib markii la darsay dhowr kiis.
Sideen ku hubiyaa xaalada baterigayga?
Aad ayey macquul u tahay in markaad aqriso dhamaan waxyaabaha aan kor kusoo sheegnay aad rabto inaad ogaato xaalada batterigaaga iyo inta wareeg ee lacag bixintu leedahay. Tani waa geedi socod aad u fudud oo aan ku sameyn karno laba siyaabood. Midka koowaad iyo kan ugu fudud ayaa lagu rakibi doonaa a app bilaash ah kuweena qalabka macruufka, oo na siinaya macluumaad aad u aasaasi ah, laakiin dhinaca kale waxaan haynaa ikhtiyaar kale oo dhameystiran oo u baahan doona rakibida a barnaamijka ku jira Mac-da ama Windows-ka.
Ku rakibidda App
Waxa ugu horeeya ee ay tahay inaan sameyno waa inaan galno app Store laga helo iPhone-ka ama iPad-ka.
Markaan halkaa tagno, waxaan raadin doonnaa barnaamijka loo yaqaan: Nolosha Battery. Aad u taxaddar marka aad raadineyso, maadaama ay jiraan dhowr magacyo isku mid ah oo naga khaldami kara. Gabi ahaanba waa bilaash. Hoos waxaad ka arki kartaa sida ay tahay.
Markii aan soo degsannay oo aan galnay, a ku eeg boqolkiiba. Boqolkiiba waxaa loola jeedaa xaalada batteriga marka loo eego xaaladdiisa bilowga ah, taas oo ah, kiiskeena waxay muujineysaa 93% marka loo eego gobolka ay ku jirtay markii aan soo iibsanaynay sheyga.
Haddii aan rabno inaan ogaano waxay boqolkiiba u dhigantaa, menu-ka bidix waxaan geli karnaa xulashada «Xogta Raw«.
Halkaas, waxay ina tusi doontaa baar leh boqolleykii hore halkaasoo aan ka arki karno sida 93% ay u dhigantaa 1600mAh laga bilaabo 1715mAh taas oo ahayd wixii aan markii hore haystay.
Baarka waxyar ka hooseeya waxaa loola jeedaa heerka lacagta hadda qalabkeenna.
Sida aan u aragno, waa codsi aasaasi ah oo fudud, laakiin wuxuu na siinayaa xogta lagama maarmaanka u ah si aan u ogaano xaaladda batterigayaga waqtiga dhabta ah. Sidii aan horey u sheegnay, waan sii wadi karnaa oo waan ogaan karnaa imisa wareeg oo aan dhameystirnay.
Ku rakibidda iBackupbot on our Mac
Waxa ugu horreeya ee ay tahay inaan sameyno waa inaan kala soo baxno barnaamijka isku xirka soo socda, gebi ahaanba bilaash iyo badbaado. U soo dejiso iBackupbot for Mac. U soo dejiso iBackupbot Windows.
Barnaamijkan waxaa badanaa loo isticmaalaa in lagu sameeyo nuqullo nuqul ah aaladahayaga laakiin tani maahan arrinta hadda na khuseysa. Iyada oo aan sidoo kale ku hubin karno xaaladda batarigeena.
Tallaabada xigta waxay noqon doontaa ku xir kumbuyuutarradeena iPhone ama iPad kombiyuutarka adoo adeegsanaya fiilada danabka. Isla marka aan ku xirno, barnaamijka ayaa ogaan doona qalabka wuxuuna u muuqan doonaa sida soo socota (1):
Marka xigta waa inaan tag aaladdayada (iPhone kiiskeena) iyo macluumaadka ku saabsan ayaa soo bixi doona, sida aan ku arki karno sawirka. Waa inaan gujinaa «Macluumaad dheeraad ah(2)
Markaan halkaa galno daaqadda soo socota ayaa soo muuqan doonta meesha, iyo macluumaadka kale, aan ku arki karno xaaladda baterigeena.
Macluumaad kasta oo macnaheedu muxuu yahay?
Xisaabinta: tirada wareegyada lacag-bixinta buuxa qalab aad leedahay.
DesingCapacity: Awoodda qalabka ee qalabkaaga waqtiga wax iibsiga.
FullChargeCapacity: xamuulka ugu badan ee aad ku gaari karto qalabkaaga waqtiga jeegga la fulinayo.
Status: xaaladda batteriga marka la eego guud ahaan.
Haddii aad wax su'aalo ah ka qabtid xogta soo baxday, ha ka waaban inaad noo qorto faallo waxaanna ku caawin karnaa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Casharrada iyo buugaagta » Sida loo hubiyo xaalada batterigaaga talaabooyinkan fudud
Difaacayaasha xabsiga aan lahayn. Cidyada dhexdeeda ayaa ah barnaamijka oo dhameystiran (midka aan  dib ula noqdo) oo ku siinaya macluumaad badan, adigoon u baahnayn mac ... Laakiin dabcan jeelka maanta macno malahan
Waxaan ahaa qof isticmaala mac, laakiin macbook wuu dhintay, xitaa sidaas darteed waxaan xasuustaa inay jirtay ikhtiyaar isla nidaamkaas oo kuu sheegayo intaas oo dhan adigoon wax rakibin
ku wareeji wareegga
wadarta MA iyo macluumaad dheeri ah xitaa laga helo diskiga adag
On Ipad-kayga 10.5-inji ah waxay ku tusaysaa tan:
Naqshadeynta kartida: 7966
Shaki ayaan ka qabaa FullChargeCapacity. Waa hagaagsan tahay? Mahadsanid
Waxaan helayaa isla wax sidaas darteed waxaan u maleynayaa sidaas ... ‍♀️
Waad salaaman tihiin. Isla xogta ku jirta FullChargeCapacity 100
On iPad Pro 11 (2018)
Sida looga hortago furitaanka otomaatigga ah ee "Now Ringing" ee watchOS 4